WhatsApp multi-fitaovana, tena? Izahay dia manamarina azy !! | Androidsis
DaniPlay | | Fampiharana Android, WhatsApp
Betsaka ny zavatra voalaza momba ny fanohanan'ny fitaovana marobe an'ny WhatsApp tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Aorian'ny herinandro niandrasana dia efa misy ao amin'ny beta farany natomboky ny fampiharana fandefasan-kafatra, tonga lafatra raha te hampiasa azy io amin'ny fitaovana mihoatra ny iray miaraka, fa misy fetrany hafa ihany koa.
Miaraka amin'ny WhatsApp misy fitaovana marobe ny mpampiasa dia hanana ny kaonty lehibe amin'ny findainy, avy eo ianao dia afaka mampiasa ilay kaonty amin'ny fitaovana efatra hatramin'ny alàlan'ny tranonkala. Fandrosoana mialoha be dia be izany, ny zava-drehetra dia notanterahina tamin'ny beta an'ny WhatsApp, satria ho tonga mandritra ny volana vitsivitsy ny tranon'omby, mbola tsy misy firaketana hamaritana.
2 Aiza no hahitana ny fiasa
3 Ny hevitro manokana
Ny fepetra ilaina indrindra hampiasa ny fanohanan'ny fitaovana marobe dia ny fampiasana ny WhatsApp beta, noho izany dia mila misoratra anarana amin'izany ianao amin'ny alalàn'ny Play Store avy ao amin'ny rohy manaraka. Ho an'ity dia hangataka anao izy hampidina ny rindranasa, tadidio ny fampiasana azy rehefa te hampiasa ilay fitaovana maro ianao.
Ity fandidiana ity dia mitovy amin'ny an'ny WhatsApp Web, satria ilaina ny scan ny kaody QR hanomboka hiasa amin'ny iray amin'ireo fitaovana. Ny safidy WhatsApp Web dia nanjavona noho ny "Fitaovana nampifandraisina", no hiseho manomboka izao, farafaharatsiny ao amin'ny kinova beta.
Ny zava-drehetra dia handalo amin'ny telefaona lehibe izay mampifandray ilay isa, ka raha maty ny telefaona dia hikatona ireo fotoana hafa. Zava-dehibe ny fahalalana izany, raha manapa-kevitra ianao amin'ny antony hafa hanombohana indray ny finday avo lenta, dia tapitra ny session rehetra noho ny antony ara-piarovana.
Anisan'ireo fetran'ny WhatsApp misy fitaovana marobe, ny mpampiasa dia tsy ho afaka mandefa na mandray hafatra raha tsy manana kinova nohavaozina ilay fitaovana, tsy azo apetraka ny resaka, ary koa ireo asa hafa izay esorina. Tsy fantatra izany na hanitsiana na tsia ho an'ny kinova farany, miaraka amin'ny daty ho faritana.
Aiza no hahitana ny fiasa
Hita ny fiasa isaky ny miditra ny safidin'ny fampiharana WhatsApp, manokana ny toerana nisy ny safidin'ny WhatsApp WhatsApp. Amin'ny dingana vitsivitsy monja dia azo atao ny mampifandray ny kaonty WhatsApp amin'ireo fitaovana hafa, indrindra hatramin'ny efatra farafaharatsiny.
Ireo fitaovana mifandray, ohatra, dia hanana telefaona lehibe ary avy eo hampiasa ny kaonty amin'ny telefaona fanampiny, tablette na PC. Raha mandroso ianao dia ho hitanao fa mitovy amin'ny iray izay azontsika tamin'ny WhatsApp Web, fa ankehitriny miaraka amina multi-support amin'ny fitaovana efatra.
Ny dingana tsikelikely dia toy izao, tadidio ny manaraka ny tsirairay amin'izy ireo mba hanatanterahana azy tsara:
Misoratra anarana amin'ny programa WhatsApp Beta ity rohy
Sintomy ary apetraho ny rindranasa ary apetaho amin'ny fitaovanao lehibe
Amin'ny findainao izao, tadiavo ny kinova WhatsApp Beta, raha vantany vao misokatra izy, tsindrio ireo teboka telo eo ankavanana ambony
Izy io dia hampiseho aminao ny safidy vaovao, antsoina ankehitriny hoe "Device mifandray", hiseho ny baravarankely vaovao miaraka amin'ny bokotra maitso lehibe manao hoe "Ampifandraiso ny fitaovana iray", kitiho eo ary izao dia hamerina anao any amin'ny WhatsApp Web izy ity mba hamaky ny kaody QR
Araho izao ny kaody QR izay haseho anao amin'ny WhatsApp Web amin'ny findainaoRaha vantany vao vita dia hiseho ao amin'ilay application ilay browser ampiasaina ary raha miasa izy na tsia, ankehitriny mandehana any amin'ny adiresy ohatra ny fitaovana hafa ary hosokafana ny session, ho an'izay, kitiho ny "Use here" ary izany no fampiharana vaovao amin'ny alàlan'ny web browser
Ny fizotrany dia mitovy amin'ireo fitaovana ireo (maximum 4) izay tianao hifandraisana miaraka dia haingana sy mitovy amin'ny WhatsApp Web izy io
Ny hevitro manokana
WhatsApp multi-fitaovana dia miasa eo ambanin'io sarontava io ihany, na dia amin'ity indray mitoraka ity aza dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana roa hafa, hatramin'ny efatra. Ny tsara dia asa lehibe iray izay rehefa mandeha ny fotoana dia matotra ho an'ireo te hanararaotra azy.
Facebook dia te handefa safidy iray izay Hita ho toy ny nataoko hatramin'izao izany, fa "multi-fitaovana", tsy te-hanasarotra rehefa mampiasa ny serivisy tranokala WhatsApp. Nisy zavatra vaovao sy manavao nantenaina, saingy hita fa mitovy ihany izany.
Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mihatsara be ny WhatsApp raha tianao hampiasaina io endri-javatra io, ao anatin'izany ohatra hoe tsy dia misy fetra loatra. Tsara raha mandeha lavitra kokoa ny WhatsApp ary ny endrika manaraka dia tsy mitovy amin'ny zavatra nampianariny antsika tamin'ny kinova beta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » WhatsApp multi-fitaovana, tena? Izahay dia manamarina azy !!
Top 8 safidy hafa amin'ny AirTags ho an'ny Android